You are at:Home»Activities»အိန္ဒိယနိုင်ငံ Vivekananda International Foundation (VIF) မှ လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
By ThayNinGa on	 December 14, 2019 Activities, News
သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့ (TISS) အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာနိုင်ဆွေဦးနှင့် ဦးသိန်းထွန်းဦးတို့အား အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့အခြေစိုက် Vivekananda International Foundation (VIF) မှ Senior Fellow Colonel Jaideep Chanda က လာရောက် တွေ့ဆုံကာ အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
TISS နှင့် VIF တို့သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုသဘောတူစာချွန်လွှာ (MoU on Cooperation) ကို နယူးဒေလီမြို့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
အိန်ဒိယနိုငျငံ Vivekananda International Foundation (VIF) မှ လာရောကျတှဆေုံ့ဆှေးနှေးခွငျး
သနေင်ျဂမဟာဗြူဟာလလေ့ာရေးအဖှဲ့ (TISS) အမှုဆောငျဒါရိုကျတာ ဒေါကျတာနိုငျဆှဦေးနှငျ့ ဦးသိနျးထှနျးဦးတို့အား အိန်ဒိယနိုငျငံ နယူးဒလေီမွို့အခွစေိုကျ Vivekananda International Foundation (VIF) မှ Senior Fellow Colonel Jaideep Chanda က လာရောကျ တှဆေုံ့ကာ အပွနျအလှနျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားကို ဆှေးနှေးခဲ့ကွပါသညျ။
TISS နှငျ့ VIF တို့သညျ ၂၀၁၉ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ ၂၈ ရကျက ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာ နားလညျမှုသဘောတူစာခြှနျလှာ (MoU on Cooperation) ကို နယူးဒလေီမွို့တှငျ လကျမှတျရေးထိုးပွီး ဖွဈပါသညျ။
Meeting with Senior Fellow from Vivekananda International Foundation (VIF)
Colonel Jaideep Chanda, Senior Fellow, Vivekananda International Foundation (VIF) visited Thayninga Institute for Strategic Studies (TISS) on December 13, 2019. Dr. Naing Swe Oo presented the brief history of TISS. Both sides discussed about the current regional situations and future cooperation. TISS and VIF signed Memorandum of Understanding on Cooperation on November 28, 2019.